Tag: mifananidzo | Martech Zone
Chipiri, February 14, 2017 Chipiri, February 14, 2017 Douglas Karr
Coastal Creative inoita rakanakisa basa kuchengeta pamusoro peyekugadzira dhizaini maitiro nekuburitsa yakakura infographic gore rega. 2017 irikutaridzika segore rakasimba rekugadzira dhizaini - ndinovada vese. Uye isu takaisa mazhinji eaya kune edu vatengi uye kunyangwe yedu yega agency saiti. Kwegore rechitatu rakateedzana, isu taburitsa ichangoburwa vhezheni yedu inozivikanwa dhizaini maficha infographic ye2017. Kunyangwe paine misimboti yekugadzira
Kugutsikana kwekushambadzira zviripo zvakanyatsoratidzwa, kuburitsa 300% yakawanda inotungamira pamutengo wakaderera makumi matanhatu neshanu pane kudhura kwechinyakare, inoshuma DemandMetric. Hazvishamise kuti vashambadzi vane hunyanzvi vakachinjisa madhora avo kune zvemukati, nenzira hombe. Chipingamupinyi, zvisinei, ndechekuti yakanaka chunk yezvinyorwa (62%, muchokwadi) inonetsa kuwana, isina nhumbu kana kusakwezva kune vavanotarisira. Iri idambudziko rakakura. "Unogona kuve nezvakanakisa zvemukati menyika," zvakagovaniswa